ऋणमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत… – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/ऋणमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत…
ऋणमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत…
ऋणमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत…अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ।
कुण्डली र ऋणसँग सम्बन्धीत योग ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्रहको कारक मानिन्छ। मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ।